Kenya oo sheegtay iney Nairobi ku qabatay sarkaal sare oo Alshabaab ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Booliska dalka Kenya ayaa sheegay inuu qabtay sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab kaddib markii uu si qarsoodi ah ku soo galay dalkaas si uu isu daweeyo. Sidaas waxaa BBC u sheegay ilo amaan oo Kenyan ah.
Saraakiil u hadlay booliiska ayaa sheegay in ninka la qabto lagu magacaabo Xasan Xanafi, axaddi lagu qabtay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, xilli uu iska daweynayey dhaawacyo ka soo gaaray Soomaaliya. Ninka la qabtay waxaa la sheegay inuu horay u ahaa weriye laga yaqaanay Muqdisho.
Qabashada ninkaan, ayaa waxay ka dambeysay markii Sirdoonka Somaliya uu xog la wadaagay Sirdoonka Kenya, isla-markaana ay Sirdoonka Kenya ku qabteen xilli uu soo galay Magaalada Nairobi.
Dambi baarayaasha waaxda ka hortagga argagixisada ee Kenya ayaa ku tilmaamay Xanafi la tuhmane sare oo haatan uu baaritaan ku socda, iyadoo lagu hayo goob aan la sheegin.
Waxaa la aaminsan yahay in sarkaalkan uu ku dhaawacmay weerar ka dhacay Soomaaliya dhowr toddobaad ka hor, taasoo keentay in xaaladdiisa caafimaad ay xumaato.
Baraasyaasha Kenya ayaa ninkaas su’aallo ka weydiinaya, iyagoo isku dayaya in ay darsaan sida uu Kenya ku soo galay, una helay dhakhaatiir daweysa.
Ninkaan, ayaa waxa uu marar badan uu safar ku tagey dalka Kenya, isagoo adeegsanaaya magacyo kala duwan, waxayna tani shaki gelisay laamaha ammaanka ee Kenya.
Ninkaan la hayo ayaa la sheegay inuu dafiray in uu yahay Xasan Xanafi, wuxuuna sheegay inuu yahay nin lagu khaldamay.
Haddii ninkaas noqdo Xasan Xanafi, waa nin dowladda Soomaaliya u heysato inuu ku lug lahaa dilal loo geystay saxafiyiin, ay ku jiraan kuwa ka howlgelayay warbaahinta dowladda. lama oga in dowladda Soomaaliya dalban doonto in loo soo gacan geliyo ninkaas iyo inkale.
Daawo: Madaxweyne Xasan iyo xaaskiisa oo lagu soo dhaweynayo Aqalka cad ee Mareykanka